“Deebiin hunda keessanu gara Isaa (Rabbiiti). [Kuni] waadaa Rabbii haqa [kan ta’eedha]. Dhugumatti, Inni uumuu ni jalqaba, ergasiis ni deebisa. [Kana kan godhuuf] warroota amananii fi hojii gaggaarii hojjatan haqaan mindaa isaaniif kennuufi. Garuu warroota kafaran waan kafaraniif jecha isaaniif dhugaatii bishaan danfaa irraa ta’ee fi adabbii laaleessaatu jira.” Suuratu Yuunus 10:4